Naadiga Buugta & Ganacsiga ee Indianapolis | Martech Zone
Monday, August 14, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maanta qadada waxaan la kulmay in yar oo asxaabtey ah si aan ugala hadlo Wadahadal qaawan. Waxaan haysanay koox fantastik ah oo shaqsiyaad matalaya warshado badan: sharci, xiriirka dadweynaha, telefishanka, telecomm, internetka, suuqgeynta iimaylka, isboortiga, madadaalada, tikniyoolajiyadda macluumaadka, suuqgeynta iyo daabacaadda!
Maaha wax xun muujinta ugu horreysa!
Inteena ugu badan si buuxda ayaan wax u aqrinay Wadahadal qaawan, qaarkood waxay ahaayeen qayb ka mid ah iyada oo loo marayo, iyo in yar ayaa dhab ahaantii hirgeliyey qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira buugga. Saaxiibbadayda waxay dareemi karaan xoriyad inay jabiyaan haddii ay jeclaan lahaayeen, laakiin waa kan aragtidayda qado-sharafta, ra'yi-celinta ku saabsan buugga, iyo sidoo kale baloog-garaynta guud ahaan:
Blogging ma noqon karto shirkadaha oo dhan. Haddii aadan noqon doonin mid hufan, waxaad waxyeello ka badan u geysan kartaa shirkaddaada.
Macaamiishaadu waxay kula sheekaysan doonaan adiga ama adiga la'aanteed. Maxaad isugu dayi weyday inaad xakameyso jihada wada hadalkaas adigoo noqonaya qofkii ugu horreeyay ee wax ka qora. Fariin fariin ah ayaa sugeysa macaamiishaada inay weydiiyaan. Balooggu waa fursad aad ku faallooto kahor intaan la weydiinin.
Siyaasadaha wax lagu qoro ee internet-ka wax ku qora ma leh Markay shaqaaluhu wax ku qoraan, ku darista qoraal aan habboonayn waxyeello kama yaraynayso inaad ku tiraahdo emayl, ama taleefan, ama wadahadal. Shaqaaluhu waxay kula xisaabtamayaan wixii ay ku sheegaan warbaahin kasta. Hadaad tahay blogger… markaad shaki gasho, weydii! (Tusaale: kamaan weydiisan rukhsad kooxda hadii aan qori karo magacyadooda, shirkadaha, faalooyinka, iwm sidaa darteed halkaan u aadi maayo)
Kheyraadku wuxuu ahaa walaac iyo mowduuc wadahadal ah. Aaway wakhtigii? Waa maxay istiraatiijiyaddu? Waa maxay fariinta?
Way fududahay in wax la qoro, laakiin waa inaad barataa sida looga faa'iideysto teknoolojiyada ka dambeysa bartaada… RSS, xiriiriyeyaasha, dib ufiirinta, pings, faallooyinka, iwm.
Haddii barta wax lagu qoro loo adeegsado istiraatiijiyad ahaan, maxay tahay soo noqoshada maalgashiga? Tani waxay ahayd dood caafimaad qabta. Waxaan u maleynayaa in heshiiska guud ee la isku raacay uu ahaa inaysan hadda aheyn ikhtiyaar meesha dib ugu soo noqoshada maalgashiga ay tahay in la qiimeeyo… waa dalab iyo rajo laga qabo macaamiishaada inay furaan xariiqyadan isgaarsiinta. Haddii kale, waxay si fudud u aadayaan meelo kale!
Haddii aad tahay qof xirfad ku leh ganacsiga, suuqgeynta ama tikniyoolajiyadda gobolka Indianapolis oo aad jeceshahay inaad nagala soo qaybgasho Naadiga Buugga, si fudud iska diiwaangeli Waxaan Doortaa Indy! oo soo gudbi sheekadaada sababta aad u dooratay Indianapolis. Waxaan kugu ridi doonnaa emaylkeena qaybinta magaca buugga xiga ee aan akhrin doonno iyo goorta aan dabagal ku samayn doonno.
Xusuusin dhinac ah, Shel Israel ayaa safar la kormeeray la baajiyay wuxuuna u furan yahay inuu sameeyo xoogaa la-talin ah. Sida uu hadalka u dhigay, Waxaan la tashan doonaa Lacagta amaahda. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Mr. Israel buuggiisa iyo dhiirrigelinta dad aad u tiro yar oo halkan jooga Indianapolis si aan ugu dhexgalno fursaddan nafteena iyo macaamiisheenna. Waxaan ku leenahay wax badan oo ka badan kharashka buugaagta!
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Pat Coyle deeqsinimadiisa uu ku abaabulay kulankeennii ugu horreeyay iyo sidoo kale Myra oo marti gelinaya naadigeenna isla markaana siiyay qado aad u wanaagsan!
PS: Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gabadhayda, waxaan la daahnay diiwaangelinta fasalka. Waad ku mahadsan tahay shaqaaleeyaha, oo galabta iga jaray!
Tags: Sheel Israa'iil
Talooyinkayga 10-ka ah ee lagu hagaajinayo Blog-gaaga
Agoosto 14, 2006 saacaddu markay ahayd 10:02 PM
Doug, waad fiicnaan laheyd inaad ilaaliso Shel Israel oo talo kuu weydineysa!
Agoosto 14, 2006 saacaddu markay ahayd 11:53 PM
Waad ku mahadsantahay ereyada naxariista leh iyo qalabka wax lagu barto, Doug. Waxay u egtahay naadi buugeed aad u wanaagsan waxayna si weyn u tixgelinaysaa in la arko in badan oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah ee buugga oo laga wada hadlayo oo la adeegsanayo.